Zadza Rondedzero yeAptlook PST Faira Zvikanganiso uye Matambudziko
musha Products DataNumen Outlook Repair Zadza Rondedzero Yezvikanganiso
Outlook Zvikanganiso uye Matambudziko
Zadza Rondedzero yezvikanganiso uye Matambudziko muOptlook PST Mafaira
Paunoshandisa Microsoft Outlook kuvhura yakashatisa yemunhu mafaira (PST) faira, iwe uchaona akasiyana mameseji ekukanganisa, izvo zvinogona kunge zvichikanganisa kwauri. Naizvozvo, pano isu tichaedza kunyora zvese zvingangoitika zvikanganiso, zvakarongedzwa zvinoenderana neyakaitika frequency. Pamhosho yega yega, isu tinotsanangura chiratidzo chayo, tsanangura chikonzero chayo chaicho uye topa muenzaniso faira pamwe nefaira rakamiswa needu Outlook kudzoreredza chishandiso. DataNumen Outlook Repair, kuti iwe ugone kuvanzwisisa zviri nani. Pazasi isu tinoshandisa 'filename.pst' kuratidza yako yakashata Outlook PST faira zita.
Iyo faira xxxx.pst harisi rako remafaira faira.
Zvikanganiso zvakaonekwa mufaira xxxx.pst. Regedza Outlook neese-anokwanisa-maapplication, uye wozoshandisa Inbox yekugadzirisa turu (Scanpst.exe) kuongorora nekugadzirisa zvikanganiso mufaira. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Inbox yekugadzirisa chishandiso, ona Rubatsiro.
Microsoft Outlook yasangana nedambudziko uye inoda kuvhara. Tine urombo nekusagadzikana.
Iyo faira xxxx.pst haina kuwanikwa.
Hatigone kuratidza dura. Iyo faira xxxx.pst yaisawanikwa.
xxxx.pst haigone kuwanikwa - 0x80040116.
Faira xxxx.pst yaisawanikwa. Dhata kukanganisa. Cyclic redundancy cheki.
Haikwanise kuwedzera folda. Iyo seti yemafolda haigone kuvhurwa. Iyo faira xxxx.pst haigone kuvhurwa.
Haugone kufambisa zvinhu. Chinhu chacho hachina kukwanisa kufambiswa. Yaigona kunge yakatofambiswa kana kubviswa, kana kuwana kwakarambidzwa.
Haugone kufambisa zvinhu. Haikwanise Kufambisa chinhu. Iyo yekutanga yakatamiswa kana kubviswa, kana kuwana kwakarambidzwa.
Haugone kufambisa zvinhu. Haikwanise kupedzisa kuvhiya. Imwe kana kupfuura paramende kukosha hakushandi.
Zvimwe zvinhu hazvigone kufambiswa. Ivo vanga vatotamiswa kana kubviswa, kana kuwana kwakarambidzwa.
Maonero PST /OST faira inononoka kana kusadaira.
Kunyangwe Microsoft ichipa Inbox Repair Turu (Scanpst.exe) kugadzirisa matambudziko mune akaora mafaera ePST, haigone kushandira most yematambudziko. Blow inowanzo sangana nematambudziko kana Inbox Kugadziridza Chishandiso kutadza kushanda:
Iyo Inbox Kugadzirisa Chishandiso hachizive iyo faira xxxx.pst…
Pane kukanganisa kwaitika kwakonzera kuti scan imiswe. Hapana shanduko dzakaitwa kune iyo yakaverengwa faira.
Inbox Repair Tool (Scanpst.exe) inorembera zvisingagumi uye haigadzirise.
Iyo PST faira yakamisikidzwa neInbox Kugadziridza Chishandiso (Scanpst) haina chinhu kana haina zvinhu zvaidiwa.
Scanpst inoshuma "Fatal Error 80040818" paunenge uchiedza kugadzirisa iyo PST faira.
Scanpst inoshuma “Kanganiso isingazivikanwe yakadzivirira kupinda kwefaira. Kukanganisa 0x80070570: Iyo faira kana dhairekitori yakaora uye haiverengeke ”.
Dhata kurasikirwa kana uchishandisa Inbox Kugadzirisa Chishandiso (Scanpst.exe) kugadzirisa mafaira ePST akaora.
Uyezve, kana uchishandisa Microsoft Outlook, unogona zvakare kusangana nezvinotevera kazhinji, izvo zvinogona kugadziriswa ne DataNumen Outlook Repair nyore.
Oversized PST faira dambudziko (iyo PST saizi faira inosvika kana kupfuura 2GB muganho).
Kanganwa kana kurasikirwa nephasiwedi kana ruzivo rwekuisa mufaira yePST.
Uye zvakare, kana iwe uchishandisa yako nharembozha kuyananisa iyo data neMicrosoft Outlook pane desktop yako, unogona zvakare lost maemail nezvimwe zvinhu nekuda kwekukanganisa kwekufananidza kana kukanganisa kwe software. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe unogona zvakare shandisa DataNumen Outlook Repair kudzoreredza iyo lost zvinhu.
Dzimwe nguva, kana iwe ukasangana nedambudziko reAptlook, zvinonetsa kuti uone chikonzero chaicho. Mumamiriro ezvinhu akadaro, unogona Ongorora dambudziko danho nedanho uye uone kuti chii chakashata neAptlook yako.